Justice et paix – KMF/Cnoe – Liberty 32: “Mila hazavaina ny antontanisa navoakan’ny Ceni” | NewsMada
Justice et paix – KMF/Cnoe – Liberty 32: “Mila hazavaina ny antontanisa navoakan’ny Ceni”
“Ilaina fanazavana avy amin’ny Ceni ny antontanisa roa samy hafa momba ny voka-pifidianana , nivoaka ny 17 novambra: novakina ampahibemaso ny voalohany; ny faharoa, nivoaka amin’ny tranonkala”. Io ny fanambarana iombonan’ny Justice et paix sy ny KMF/Cnoe ary ny Liberty 32 teny Antaninarenina, omaly.
Mbola tsy ampy ny fanabeazana ara-pifidianana, na nisy aza ny fanantenana teny ifotony toy ny nataon’izy ireo. Noho izany, takina hanentana sy hampianatra ny olom-pirenena momba ny zotram-pifidianana na ny Ceni na ny antoko politika. Maro ireo lesoka notsiahivin’izy ireo tamin’ny fifidianana. Na izany aza, nizotra tamim-pilaminana. Nihena ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy: 54,23M%, raha 61,85 % izany tamin’ny 2013.
Mila fanatsarana ny fifidianana fihodinana faharoa
Kara-pifidianana tsy voazara, fanamafisana ny fiofanan’ireo mpikamban’ny birao fandatsaham-bato, fahamatoran’ny fikirakirana voka-pifidianana sy ny mangarahara, fanarahana ny lalàna momba ny peta-drindrina amin’ny valim-pifidianana eny anivon’ny fokontany sy ny kaominina…
Ireo ny santionan’ny tolo-kevitr’izy ireo ho fanatsarana ny fifidianana. Eo koa ny fampirisihana ny olona handray andraikitra amin’ny fiainam-pirenena, ny fanatsarana ny lalàm-pifidianana: fanomezan-danja ny vato fotsy, fa efa fanehoan-kevitra izany…
Tolo-kevitr’izy ireo amin’ny ho avy na ny lavitra ezaka kosa ny fitoniana eo amin’ny mpiantsehatra rehetra mandritra ny zotram-pifidianana; ny fanaraha-maso sy fampitsaharana ny herisetra amin’ny endriny rehetra, indrindra amin’ny tambajotra sosialy; ny fampiharana ny mangarahara sy ny lalàna velona…
Maro ireo soso-kevitra naroson’ny firaisamonina sivily tsy noraisina toy ny fanafoanana ny kara-pifidianana, ny fanitarana ny fe-potoan’ny fampielezan-kevitra, ny famerana ny fandaniana amin’ny propangady.